Hodges U mitarika ny làlan'ny diplaoma amin'ny informatika »University of Hodges
Fidirana - Hawks ho avy
Traikefa ananan'ny mpianatra
Fampahalalana ara-bola ho an'ny mpianatra
Fizarana vaovao ho an'ny mpianatra
Handinika ny mpianatra
Fepetra sy fepetra amin'ny fisoratana anarana
Mianara momba ny mpiasa ao aminay
Momba an'i Hodges
Tongasoa ny filoha
Hodges U mitarika ny làlan'ny diplaoma amin'ny solosaina
Fiainana Kampus, Faculty & Staff, sekoly
Ny mpiara-miasa Dean Tracey Lanham dia mitarika ny teknolojia ao amin'ny Hodges University
Ny mpiara-miasa Dean Tracey Lanham no lohalaharana amin'ny fanasana ireo vehivavy hanatevin-daharana ny sehatry ny haitao amin'ny alàlan'ny fitondrana fandaharana amin'ireo zazavavy amin'ny sekoly ambaratonga faharoa sy ambaratonga faharoa. Izany no mahatonga ny profesora Lanham tafiditra amin'ny NCWIT izay iasàny tsy miasa reraka mba hitondrana ny iraky ny NCWIT amin'ireo tovovavy any Southwest Florida.
Manolotra ny oniversite Hodges Fampianarana programa solosaina an-tserasera, programa fanamarinana, ary mari-pahaizana momba ny cyber sy fiarovana izay natao hanomanana ny mpianatra hiasa amin'ny andro voalohany.
Vakio bebe kokoa momba ny antony maha-safidy tsara ny sehatry ny informatika ho an'izay rehetra ao Fiainana ao Naples lahatsoratra.
Ny Hodges University, andrim-panjakana tsy miankina tsy miankina amin'ny fanjakana natsangana tamin'ny taona 1990, dia manomana ny mpianatra hampiasa fahalalana ambony amin'ny ezaka manokana, matihanina ary olom-pirenena. Miaraka amin'ny 10,000 mahery nahazo diplaoma manana tahan'ny 93 isan-jaton'ny fahombiazan'ny asa aman-draharaha, Hodges dia ekena amin'ny famolavolana programa izay noforonina manokana ary natolotra mba hanompo vahoaka mpianatra olon-dehibe isan-karazany. Miaraka amin'ireo campus any Naples sy Fort Myers, Florida, Hodges dia manome kilasy andro, hariva ary an-tserasera azo ampianarina ampianarin'ireo mpampianatra maneran-tany ho an'ny mpianatra ambaratonga bakalorea sy diplaoma. Hodges dia voatendry ihany koa ho Institution Hispanic Serving, ary mpikambana ao amin'ny Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU). Misy fampahalalana bebe kokoa momba ny Oniversite Hodges ao amin'ny Hodges.edu.
Miaraha amin'ny Drive Donation Pet and Person Donation
Hodges Connect dia manampy amin'ny famenoana ny banga amin'ny fahaiza-miasa
Hodges U no malaza indrindra amin'ny Vets 2020
Nanambara i Hodges University Hodges Connect
Hetsika ho an'ny fiaraha-monina
Fampahalalana momba ny fidirana
Vaovao - Hodges Connect